UK oo hoos u dhigaysa dadka Soogalootiga ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Raysalwasaaraha UK David Cameron ayaa lagu wadaa maanta oo Jimce ah inuu soo bandhigo qorshe cusub oo uu ku xakameenayo dadka soogalootiga ah ee ka imaanaya dalalka kale ee Midowga Yurub.
Qorshaha Cameron ayaa waxaa kamid ah dadka kasoo guuraya dalalka kale ee Midowga Yurub ee raba inay degaan UK, in aan lasiin doonin lacagta Cayrta 4ta sano ee ugu horeysa.
David Cameron ayaa sidoo kale doonaya inuu wax ka bedalo lacagta lasiiyo dadka shaqada ka dhamaatay ee kasoo jeeda dalalka kale ee Midowga Yurub.
Halkaas kuma eka qorshaha Cameron wuxuu sidoo kale doonayaa in dadka soogalootiga ah ee aan shaqo ku helin muddo 6 bilood gudahood ah inay dalka UK isaga baxaan.
Hogaamiyaha UK ayaa sheegay in hadii qorshihiisan ay horjoogsadaan dalalka kale ee Midowga Yurub uu go’aamin doono in dowlada UK isaga baxdo Midowga Yurub.
Wuxuu qorshahan kusoo beegay Cameron xili ay muddo bilo ah ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka UK, waxaana xisbiga Cameron culeys iyo loolan weyn uga imanaaya xisbiyada xagjirka ah ee kasoo horjeeda dadka soogalootiga ah sida UKIP.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la kulmey dhigiisa Talyaaniga (Sawiro)